เฮือนสบาย Saabay Ikhaya 4of4 isimbo saseThai esixekweni - I-Airbnb
เฮือนสบาย Saabay Ikhaya 4of4 isimbo saseThai esixekweni
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguMark
Indlu yaseSaabay ibonelela ngeekhabhinethi ezi-4 zodidi lwaseThai kwindawo efihlakeleyo kufutshane nombindi weChiang Rai. Imizuzu eli-10 ukusuka kumbindi wesixeko kunye ne-Night Bazaar yayo, imizuzu engama-20 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya. I-Chiang Rai isisiseko esifanelekileyo sokujonga iitempile ezininzi kwiingingqi, ukutyelela iGolden Triangle, izizwe zeenduli, kunye nokuhamba ngentaba okubukekayo.
I-Saabay House ibonelela ngeekhabhathi zesitayile saseThai ezihonjiswe ngesitayile, iikhabhini zinegumbi lokuhlambela, iti kunye nokwenza ikofu, kunye nefriji. Kukho isidlo sakusasa se-buffet esibonelelweyo, ukufikelela kwi-BBQ yoluntu kunye nendawo yokutyela, kunye nendawo egqunyiweyo yesiqhelo kwindlu edibanayo yaseThai. I-WiFi yoncedo inikezelwe.
Sifumaneka ngaphandle kwesixeko saseChiang Rai, imizuzu eyi-10 ukusuka kwiziko, imizuzu emi-5 ukusuka kwi-Central Plaza complex, imizuzu engama-20 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya, imizuzu emi-5 ukusuka kwisikhululo esikhulu sebhasi. IChiang Rai likomkhulu lengingqi, Isixeko sikwalikhaya kwinani elimangalisayo leetempile ezintle-ukusuka kwilitye lesikhumbuzo lembali ukuya kwimizobo engaqhelekanga yangoku.
Ngokuqhelekileyo kuya kubakho umntu kwisiza okanye ofumaneka ngefowuni ephathwayo. Iilwimi ezithethwayo sisiThai, isiMandarin, nesiNgesi
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tambon Tha Sai